New Galaxy F62 na batrị 7000 mAh: atụmatụ, ọnụahịa na ndị ọzọ | Gam akporosis
Samsung ejirila batrị nwere ike rụọ ọrụ ọhụrụ ya na obere batrị iji nye opekata mpe ụbọchị abụọ nke nnwere onwe yana iji ya eme ihe. Anyi na ekwu banyere ya Samsung Galaxy F62, mobile nke onye ọrụ South Korea kwupụtara na mbụ ka ewepụta ya ma bupụta ya taa dị ka arụmọrụ arụmọrụ na njirimara mara mma na nkọwapụta teknụzụ, nke bụ ndị anyị kọwara n'ụzọ zuru ezu n'okpuru.
Tupu ị gaa na ya, ọ dị mma ịkọwa eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ n'ime ihe ndị edere banyere ngwaọrụ a na izu ndị na-adịbeghị anya gara nke ọma, gụnyere atụmatụ ya, nke dabere na panel nwere oghere na ihuenyo na igwefoto igwe anọ.
1 Ihe niile gbasara Samsung Galaxy F62: ekwentị na-abịa na nhazi nke 10 Galaxy Note
Ihe niile gbasara Samsung Galaxy F62: ekwentị na-abịa na nhazi nke 10 Galaxy Note
Iji malite, Ihuenyo nke Samsung Galaxy F62 bụ otu n'ime Super AMOLED Plus teknụzụ wee bịa na obere obere nke 6.7 sentimita asatọ na diagonally. Mkpebi nke a bụ FullHD + na 2.400 x 1.080 pikselụ, nke na-enye anyị usoro ngosi ngosi 19.5: 9. Na nke a, anyị ga-agbakwunye n'eziokwu na enwere oke bezels ndị na-ejide ya na ebe ngebichi nwere oghere oghere, dị ka anyị kwurula, ya na ihe ngosi igwefoto selfie 32 MP nwere f-aperture Gbanyụọ
Chipset processor na - ebi n’okpuru ekwentị a ka amagoro Exynos 9825, nke anyị na-ahụ n'okpuru mkpuchi nke Galaxy Note siri ike. Igwe okwu mkpanaka a 7-core 2.73nm na-agba ọsọ na elekere kachasị nke 76 GHz ma na-akwado ya site na Mali GXNUMX GPU. N'aka nke ya, n'ime ihe nlere a jikọtara ya ebe nchekwa RAM nke 6 ma ọ bụ 8 GB na ebe nchekwa dị n'ime nke 128 GB, nke enwere ike gbasaa site na kaadi microSD nke ruru 512 GB.
Batrị bụ ike kachasị na Galaxy F62, ịbụ nke Ikike 7.000 mAh. Nke a, na ịdị nro, na-enye nnwere onwe nke ụbọchị 2 yana iji ojiji. Tụkwasị na nke ahụ, a na-akwụ ya ụgwọ site na ọdụ ụgbọ USB-C na teknụzụ na-ebu ngwa ngwa 25 W. O doro anya, nha batrị ahụ pụtara na ịdị arọ nke ekwentị anaghị adị nfe, nke a bụ ihe dịka gram 213, ebe akụkụ nke ekwentị ahụ dị. 163.9 x 76.3 x 9.5 mm.
Isi foto foto nke mobile di okpukpu ano ma mejuputara ya ihe mmetụta bụ isi nke 64 MP nwere oghere f / 1.8, oghere anya nke 12 MP na oghere f / 2.2 na oghere ele 123 Celsius, ihe omimi miri emi nke 5 MP nwere oghere f / 2.4 na nnukwu 5 MP nwere oghere f / 2.4. Ihe usoro azụ a na-esonyere ihe ọkụ ọkụ ọkụ.
Akụkụ ndị ọzọ gụnyere sistemụ arụmọrụ nke Android 11 na One UI 3.1 dị ka akwa mkpuchi.
IKIRU Infinity-O Super AMOLED tinyere 6.67-inch FullHD + 2.400 x 1.080 pikselụ
Nhazi Samsung Exynos 9825 octa-isi 2.73 GHz max.
Ohere TERLỌ N'IME 128 GB (gbasaa site na kaadi microSD ruo 512 GB)
Ndị isi Quadruple azụ: 64 MP Isi + 12 MP Wide Angle + 5 MP Macro + 5 MP Bokeh / Ihu: 32 MP
UMUAKA 7.000 mAh ikike na 25 watt ngwa ngwa ụgwọ
OS Android 11 n'okpuru akwa mkpuchi otu UI 3.1
Njikọ Wi-Fi / Wi-Fi Direct / Bluetooth 5.0 / NFC / GPS + GLONASS + Galileo / Nkwado Dual-SIM / 4G LTE
Mbibi na ibu ibu 163.9 x 76.3 x 9.5 mm na 213 gram
A malitela Galaxy F62 na India taa, mana ọ gaghị ebido ire tupu February 22. Ọ na-abịa na agba agba atọ: akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, isi awọ, na-acha anụnụ anụnụ. Onwebeghị ihe amara maka ịdị adị na ahịa ndị ọzọ. Ebe nchekwa na nsụgharị na ọnụahịa nke ekwentị ndị a:
6 + 128 GB: 23.999 rupees Indian, nke ruru ihe dị ka euro 272 na ọnụego mgbanwe taa.
8 + 128 GB: 25.999 rupees Indian, nke ruru ihe dị ka euro 295 na ọnụego mgbanwe taa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » New Samsung Galaxy F62 na batrị 7.000 mAh: atụmatụ, nkọwa na ọnụahịa